Ungayidweba njani imbonakalo yomhlaba wasekwindla kunye ne-watercolor ngokwamanqanaba? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungayidweba njani imbonakalo yomhlaba wasekwindla kunye ne-watercolor ngokwamanqanaba?
I-Autumn lixesha lonyaka xa indalo iqhuma yonke imibala yayo. Yonke into eluhlaza yaqala ukutshintsha: jika tyheli, blush, yila, njalo-njalo. Indalo itshintsha kakhulu. Xa upenda indawo yasekwindla enezinto ezinamanzi, iipende zemibala eyahlukeneyo zidityaniswa kwaye umfanekiso ube ngcwele kwaye ungalindeleki. Ungayidweba njani imbonakalo yomhlaba wekwindla yasekwindla:
Ukuba ufuna ukuzoba indalo yasekwindla, ke uya kuyila umfanekiso oya kuyikhetha imibala yasekwindla: obomvu, orenji, tyheli. Ngokwesiqhelo kwimizobo malunga nekwindla bayazoba imithi kunye namahlamvu ayo. Ewe, imithi mihle kakhulu.
Indlela yokuzoba inyathelo ngenyathelo kwividiyo:
Ungazoba imbonakalo yomhlaba wasekwindla ngendlela yehlathi ekwindla, ungazoba intsimi ekwindla. Ukuba uzoba intsimi, yahlulahlula-hlula iphepha libe ngamacandelo amabini - kumantla aphezulu uzoba isibhakabhaka esimdaka, umoya, zoba nengca etyheli, ingca yeentaka ebhabhela emazantsi.
Ukuma komhlaba we-Autumn akudingi zakhono zikhulu, sikhetha imibala eqaqambileyo, ijusi. Masiqale ngokuzoba imvelaphi - inkungu emnyama eluhlaza. Emva koko sidweba i-alley, sidwebe amasebe kunye neentsika zemithi. Ukubetha amagqabi, zoba indlela enamatye. Bukela ividiyo:
I-Autumn lixesha elihle kakhulu, kunye nemibala eqaqambileyo imibala yayo ipeyinta yonke imithi kwaye yenza yonke into ejikeleze imhle kwaye intle. Amagcisa amaninzi ayathanda ukupeyinta ngeli xesha lonyaka, abonisa bonke ubuhle kwimizobo yabo eqaqambileyo.
Ukuzoba imo yasekwindla, kufuneka uqale wenze umzobo ngepensile elula, kwaye ke eyona nto inomdla kakhulu, ukudibanisa imibala, imibala eqaqambileyo xa upenda, kwangoko yenza ukuba umzobo wakho uphile. Udidi oluphambili lomzobo onjalo unokubonwa kwividiyo ukuze ufunde indlela yokwenza ngokwakho.
I-Autumn lelona xesha lihle kakhulu lonyaka, emva kwentwasahlobo, kunjalo :) Kukho into ethile yomlingo, ukuqaqamba kunye nento entle engaqondakaliyo kolu buhle bungapheliyo.
Kulula ngokwaneleyo ukupeyinta imbonakalo yekwindla ngee-watercolors. Siza kudinga iphepha le-watercolor, iikhonkrithi zamanzi, ipensile elula, iibrashi squirrel namanzi.
Ngomsebenzi, singahamba ngaphandle kwayepeyinti kwendalo, kodwa ndikubonelela ngendlela elula yokupeyinta ukwindla ngepeyinti kukuzoba ukusuka kumanzi agqityiweyo avela kwi-Intanethi.
Ukuqalisa, yenza umzobo ngepensile. Sidweba imigca emincinci kakhulu, iphantse ingabambeki, kuba ipeyinti yokuhambisa amanzi ibonakala kwaye ipensile yonke iya kubonakala.
Xa usebenza ngeelikhonkrithi zamanzi, kufuneka ulumke kakhulu: sebenzisa ithontsi lokupeyinta kunye nokuxuba ngamanzi amaninzi. Zive ukhululekile ukudibanisa imibala ekwindla ngqo ephepheni, vumela umbala omnye uguqukele kolunye.
Senza imvelaphi ibenqabile ngakumbi, kwaye umphambili ngokwahlukileyo, kunye nemigca ecacileyo.
Nazi ezinye iiliforati ezilula kwaye zintle ezinomhlaba wasekwindla.
Isifundo sevidiyo esidweba indawo yasekwindla kunye neepeyinti zamanzi
Nawuphi na umfundi angazoba imbonakalo yasekwindla kwi -colc yamanzi. Siqala ukupeyinta imbonakalo yomhlaba ngokumakisha iindlela ezisehlathini okanye kwipaki, zoba imozulu yemvula, senze mnyama isibhakabhaka kwaye siqale ukupeyinta imithi eqaqambileyo. Nanku umzekelo wemeko yasekwindla
Xa usebenza ngeekonkrithi zamanzi, isiseko saso kuqala sitsaliwe ngamanzi. Amanzi afakwa kwiphepha lephepha le-watercolor, kwaye ipende ehlanjululwe isetyenziswe ngaphezulu kwebhulashi.
Phambi kokuba uqale umsebenzi kwibhanti (iphepha), kuyacetyiswa ukuba wenze umzobo obonakalayo kancinci ukuze wazi ukuba mithi phi na, indlela, njalo njalo.
Emva kokuba umva utsaliwe kude kube amanzi amile ngokupheleleyo, imibala iya isiqala ukuqaqamba kwaye, ewe, imigca ecacileyo iyotsalwa.
Yonke into ibonakala ngokucacileyo kwividiyo:
I-Autumn ihlala yaphefumlela imibongo kunye namagcisa ukwenza ubugcisa. Ngoncedo lweepeyinti ze-watercolor ungazoba imbonakalo yasekwindla emangalisayo, kodwa ndikunika ukubukeka komntwana ngendlela onokuyipenda ngayo ukwindla nge-watercolor:
Ilula kakhulu kwaye iyilo 🙂
Ungazoba ekwindla usebenzisa amagqabi kunye neepeyinti:
Lo mfanekiso kwakhona utsalwa ngumntwana, le yindlela abona ngayo ukwimo yasekwindla:
Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa usenza indawo yasekwindla; imibala efana neblue, tyheli kunye neorenji zihlala zilawula ukwindla komhlaba. Ke ndifuna ukunika enye yeendlela zokukhetha ukwimo yasekwindla, apha umbhali womsebenzi waqala ngokwenza umzobo ngoncedo oluhlaza okwesibhakabhaka kunye noluhlaza, yiyo loo nto ubuhle babusiphumo.
Nanku umfanekiso ofanele ufumane
Omnye umntu uya kucinga ukuba umbhali upeyinta ulwandle, kodwa oku akunjalo, ke waqala ke ukupeyinta imbonakalo yasekwindla.
Imithi sele isondele
Sele ibonwe ukuba kumzobo wexesha elizayo kuyakuba khona ekwindla
Ndingathanda ukuhambahamba kwesi sikwere.
Imibuzo ye-22 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,308.